Iyadayiswa eshicilela iphephandaba iSolezwe | Isolezwe
Iyadayiswa eshicilela iphephandaba iSolezwe
Isolezwe / 19 February 2013, 10:14am / INTATHELI YESOLEZWE
ISIKHULU esiphezulu enkampanini iSekunjalo Independent Media Consortium, uDkt Iqbal Surve, sithe ukuthenga kwabo i-Independent News & Media SA kuzothuthukisa leli bhizinisi kuqhakambise nokubhalwa kwezindaba ngezilimi zesintu.
INKAMPANI yabashicileli ese-Ireland, i-Independent News & Media (INM SA), isivumile ukudayisa umunxa webhizinisi layo eliseNingizimu Afrika.
Isikhondlakhondla sebhizinisi esiphethe amaphephandaba amaningi esiNgisi okubalwa kuwona neSolezwe, sizodayiswa ngo-R2 billion. Ibhodi labaphathi bale nkampani livumelene ngokudayiselana nabeSekunjalo Independent Media Consortium. ISekunjalo iholwa yisiqumama uDkt Iqbal Surve.
UDkt Surve ukuqinisekisile ukuthi bazoyithenga le nkampani ethi osekusele wukuthi kusayinwe amaphepha ukuze iwele ezandleni zabo ngokugcwele.
“Ngijabulile ukuthola ithuba lokubuyisela la maphephandaba eNingizimu Afrika,” kusho uSurve.
Uthe bazibophezele ekutshaleni imali kuleli bhizinisi futhi bakholwa wukuthi izinkampani zamaphephandaba ezidonsa kanzima zingaguqulwa zenze kahle.
ISekunjalo inamasheya enkampanini eyiphethe ngokuhlanganyela nezinyunyana nezinkampani zomphakathi.
I-INM SA enekomkhulu e-Ireland idayisa le nkampani ohlangothini lwayo oluseNingizimu Afrika nje ngenxa yokuthi icwile ezikweletini. Emaphepha-ndabeni amakhulu akwi-Independent Media kubalwa Isolezwe, The Mercury, The Star, Cape Times namanye.
UDkt Surve uthe enye yezinhlelo abanazo ukukhulisa amaphephandaba ashicilelwa ngezilimi zesintu njengokuthi eLimpopo kube khona iphephandaba elishicilelwa ngeSepedi.
Abanye abantu abakhona kule-Consortium yizinhlangano zomphakathi ezifundazweni ezehlukene kanti eminye imibiko ithe kukhona nosomabhizinisi odabuka eThekwini uMnuz Sandile Zungu.